Dil ka dhacay duleedka Muqdisho& xog dhamestiran oo laga helay!!
Sida ay sheegayaan wararka inaga soo gaaraya duleedka magaalada Muqdisho gaar ahaan halka loo yaqaano Tabeelaha Sheekh Ibraahim, koox hubeysan ayaa waxa ay fiidnimadii xalay halkaasi ku dileen nin ilaalo ka ahaa geerish gaadiidka lagu xareeyo.
Rag hubeysan ayaa ninkan oo xilligaasi ku sugnaa geersihka rasaas la dhacday, intaasi kadib ayay goobjoogayaal sheegeen inay goobta ka baxsadeen dableyda dilka geysatay oo ilaa hadda aanan la garaneyn cida ay ka tirsan yihiin.
Warar aan helnay ayaa waxa ay sheegayaan ninka la dilay geersihka uu ilaalada ka hayay in maalmahan ay isku heysteen laba reer oo midba dhankiisa uu sheeganayay inuu dhulkaasi leeyahay.
Ciidanka ammaanka ayaa waxa ay tageen goobta uu dilka ka dhacay, waxayna soo qaadeen meydka marxuumka la dilay, baaritaan ay ciidamadu sameeyeen lama soo sheegin cid lagu soo qabtay.
Xukuumadda Somaliya oo beenisay in xilka laga qaaday Wasiir ku xigeenka Batroolka
Dilal ka dhacay deegaano ka tirsan gobolka Hiiraan
Faah faahin:-Dagaal Khasaaro geystay oo ka dhacay Magaalada Gaalkacyo
Al-shabab iyo Kenya oo ka hadlay weerar ka dhacay duleedka Gaarisa
Faahfaahin Khasaare ka dhashay Qarax ka dhacay Muqdisho
8; ka mid ah Askarta Kenya oo ku dhintay qarax ka dhacay Waqooyi Bari
Faahfaahin Qaraxyo ka dhacay Muqdisho
Qarax ka dhacay goordhow magaalada Muqdisho.
Suudaan oo laga digay in ay noqoto sidda Soomaaliya oo kale